I-TPR ayisiHlip hanger
ABS ngerabha zipeyintwe kwendawo yokuhlala
Metal kwendawo yokuhlala
PE Camera kwendawo yokuhlala
PVC Camera kwendawo yokuhlala
Intambo ephothiweyo yeeHanger
Hanger ngentando yakho
Ukusukela nge-19 kaDisemba ukuya kuma-21, 2020, umboniso we-4 waseLipu weSixeko weHanger kunye neMiboniso yoku-Odola yabanjwa kwiSakhiwo esingu-1 se- "IHanger City Plaza".
ngomphathi ku 21-02-02
Ukusukela nge-19 kaDisemba ukuya kuma-21, 2020, umboniso we-4 waseLipu weSixeko weHanger kunye neMiboniso yoku-Odola yabanjwa kwiSakhiwo esingu-1 se- "IHanger City Plaza". Zizonke iinkampani zokuxhoma i-110 ezisayine izivumelwano kunye nabathengi abavela kwihlabathi liphela, benemali eyi-1 yezigidigidi. RMB, oku kukukhuthaza ...
Umsunguli Lipu Hometime Household Products CO., Ltd. inxaxheba kushishino kwendawo yokuhlala ukususela ngo-1992.
Umsunguli Lipu Hometime Household Products CO., Ltd. inxaxheba kwishishini kwendawo yokuhlala ukususela 1992. Kwaye umseki wasebenzisana namaqabane akhe ukwakha mveliso ngo-1996. Iminyaka eli-12 yamava azinikele kushishino kwendawo yokuhlala, siye mveliso yethu ngo-2004 kwaye sijolise ekwenzeni isiko ...
Ukuze siphucule ukusebenza kwefektri yethu
I-Lipu Hometime Household Products Co, Ltd imeme umhlohli oqeqeshiweyo ukuba avule iseshoni yoqeqesho ye-5S yabo bonke abasebenzi bolawulo kwigumbi lokungenisa kumgangatho wesibini kumzi-mveliso wethu. Ukusuka kwiklasi yoqeqesho, umhlohli usazise ukuba yintoni i-5S, kwaye uququzelele uthotho lwemisebenzi, masi ...
UKUFUNDA SIMAHLA 008613580465664
IDILESI Jinniu Industrial Park, Licheng Town, Lipu County, Guilin, Guangxi, China
© Copyright - 2015-2025: Onke amalungelo agciniwe.